Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ဆန်းစစ်ခြင်း
ဘာမှမလုပ်နိုင်အောင်သင့်ဖုန်းကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ထိုမှတ်ချက်9ဟုတ်လား. ၎င်းတွင်အရာအားလုံးရှိပြီးမီးဖိုချောင်စုပ်သည်ဖုန်း၏အင်အားကြီးမားသောအင်အားကြီးအင်ဂျင်တစ်ခုထဲသို့ထုပ်ထားသည်.
အဆိုပါ phablet ရဲ့အကြီးအကျယ်, လှပသောမျက်နှာပြင်, စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး Bluetooth တံဆိပ်အသစ်တွင် Note fans salivating ရှိသည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အဆိုပါလုပ်အရာအားလုံးကိုဖုန်း” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 22 သြဂုတ်လအပေါ် theguardian.com သည် 2018 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကြီးသောရှင်ဘုရင်, စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဖုန်းများသည်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်ပြန်လာသည်, ဒါပေမယ့် Samsung Galaxy Note အသစ်ပါ9နေဆဲရိုက်နှက်ဖို့ phablet?
Note Series ကစမတ်ဖုန်းကြီးတွေကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့တယ် 2011 နောက်ဆုံးခုနစ်နှစ်တာကာလအတွင်း၎င်းသည်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်အတူပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပြီး feature-packed ပိုများလာသည်. ဘယ်မှာလဲ Galaxy S9 စီးရီး သာမာန်လူများအတွက် Samsung ၏ထိပ်တန်းဖုန်းဖြစ်သည်, ထိုမှတ်ချက်9ဟုတ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်း“ ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာငါလုပ်လို့ရတယ်” ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်စွမ်းအားဖြစ်တယ်.
အဆိုပါ Note9ရဲ့မျက်နှာပြင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ် – 6.4in မှာကထက် 0.1in ပိုကြီးပါတယ် နောက်ဆုံးဗားရှင်း - ဒါပေမယ့်ဒါဟာအမှန်တကယ်အတွက်တပ်ဆင်ထက်ပိုမိုကြီးမား smidgen ပါပဲ Galaxy S9 +.
2017မှတ်စု 8 ဘယ်ဘက်မှာ, မှတ်စုအသစ်9ညာဘက်တွင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ဖုန်းဘေးတွင်ဖုန်းအသစ်ထည့်ပါ မှတ်စု 8 သင်ကွာခြားချက်ကိုပြောပြရန်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မယ်, သင်နည်းနည်းပိုပြီးနီးကပ်စွာကြည့်သည်အထိ.
bezel များသည်အနည်းငယ်သေးငယ်ပြီးနှစ်ဖက်စလုံးမှလူမီနီယံတီးဝိုင်းမှာမူ ပို၍ ထင်ရှားသည်. ယခုကင်မရာနှစ်လုံးစနစ်သည်ဖန်ခွက်၏နောက်ကျောကိုအနည်းငယ်ဂုဏ်ယူနေပြီးလက်ဗွေစကင်နာကိုကင်မရာများမှ၎င်းတို့အောက်သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်. ဒါဟာသေးငယ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ပေမယ့်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုမှန်ကန်စေသည်.
စမတ်ဖုန်းမှာအကောင်းဆုံးရနိုင်တာကဖန်သားပြင်ပဲ, တောက်ပသော, ရဲရင့်အရောင်များ, Inky လူမည်းများနှင့်အလွန်ကြီးစွာသောကြည့်ရှုထောင့်. ဒီ Note ဟာ Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်နည်းပညာအတွက်အမြဲတမ်းပြသခြင်းပဲ.
screenရာမမျက်နှာပြင်တွင်အားနည်းချက်များရှိသည်, သော်လည်း, ဒါကြောင့်မှတ်စုစေသည်အဖြစ်9နှစ် ဦး ကိုလက်မရှိဘဲကိုင်တွယ်ရန်အတော်လေးခက်ခဲ. ဖုန်းတစ်လုံးကနောက်ကျောမှာလက်စွပ်တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းမယ်ဆိုရင်, ဒါဒါ. ၂၀၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် Samsung တွင်လက်ကိုင်ကြိုးများပါရှိသင့်သည်. နားကြပ်ပေါက်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နိုင်တယ်.
လက်ဗွေစကင်နာကိုကီးဘုတ်အောက်သို့ပြန်ထားခြင်းကအသုံးပြုရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်, ဒါပေမယ့်သေးငယ်တဲ့လက်နှင့်အတူသူတို့အဘို့ရောက်ရှိရန်တစ်လမ်းပိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Screen ကို: 6.4quad HD ကို + AMOLED ၌တည်၏ (516ppi)
processor: Octa-core ကို Samsung က Exynos 9810 သို့မဟုတ် octa-core Qualcomm Snapdragon 845
ရမ်:6ဒါမှမဟုတ် 8GB RAM ပါ
သိုလှောင်ခြင်း: 128 သို့မဟုတ် 512GB + microSD ကဒ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Samsung အတွေ့အကြုံ9(Android မှာ 8.1)
ကင်မရာကို: OIS နှင့် dual aperture ပါ ၀ င်သော 12MP နောက်ဘက်ကင်မရာများ, 8အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, ဘလူးတုသ် 5, GPS နှင့် Iris အာရုံခံကိရိယာ
ဒိုင်မန်းရှင်း: 162 x က 76.4 x က9မီလီမီတာ
ကျောပိုးအိတ်နှစ်ခုလုံးကဖန်ခွက်များ. အဆိုပါမှတ်ချက် 8 အနက်ရောင်နှင့်မှတ်စုအတွက်လက်ဝဲပေါ်မှာ9အပြာအတွက်ညာဘက်ပေါ်မှာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
လိုပဲ Galaxy S9, ထိုမှတ်ချက်9တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနား Processor ကိုရှိပါတယ်, သင်ဘယ်မှာဝယ်တယ်ဆိုတာပေါ်မူတည်တယ်. ဥရောပမော်ဒယ် Samsung ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Exynos ရှိပါတယ် 9810 ချစ်ပ်နှင့်စမ်းသပ်ပြီးဗားရှင်းဖြစ်ခဲ့သည်, မြောက်အမေရိကမော်ဒယ် Qualcomm ၏ Snapdragon ရှိပါတယ်နေစဉ် 845 Processor ​​ကို, သောအတွက်အသုံးပြုသည် OnePlus6နှင့်အခြားထိပ်တန်းဖုန်းများဖြန့်ချိ 2018. စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ခုဗားရှင်းအကြားအလားတူဖြစ်သင့်သည်, အစွန်းမှာကှာဟရှိစေခြင်းငှါပေမယ့်.
အဆိုပါမှတ်ချက်9ပွဲတစ်ပွဲသည်ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Android ဖုန်းဖြစ်သည်, နှင့်အပူလွန်ကဲခြင်းမရှိဘဲအများကြီးပိုရှည်များအတွက်အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်, သောအလွန်သိသာခဲ့ပါတယ် Shadowgun Legends တစ် ဦး နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ Pixel 2XL သို့မဟုတ် OnePlus 6.
အသုံးပြုတဲ့ desktop ကွန်ပျူတာအဖြစ်၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည် Samsung ရဲ့ DeX စနစ်, ပုံမှန် USB-C မှတဆင့် HDMI ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်ဖုန်းကိုမော်နီတာတစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ခြင်း, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်. 1080p မော်နီတာတွင်ကြည့်ရှုရသော Chrome သည်အလွန်စျေးကြီးသော PC များထက်အလွန်ကြီးမားပြီး web တောင်းဆိုမှုများကိုကိုင်တွယ်သည်.
ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ခိုင်မာခဲ့သည်, ကြီးမားသော 4,000mAh စွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီကြောင့်စိတ်ပျက်ရသော်လည်း, ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုက်ညီ Galaxy S9 +, ဘယ်က 12.5% သေးငယ်စွမ်းရည်ဘက်ထရီ. မျက်နှာပြင်အမြင့်ဆုံး QHD + set ကိုအသုံးပြုပြီးဘက်ထရီသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကြာရှည်သည် 25 FHD + resolution သို့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအားသွင်းမှုများသို့မဟုတ်တစ်နာရီကြာသောကြာချိန်.
မှတ်စုကိုသုံးနေစဉ်9အစဉ်အမြဲ -on ကို display ကိုတက်ကြွစွာနဲ့ငါ့မူလတန်း device ကိုအဖြစ်, အက်ပလီကေးရှင်းများကိုငါးနာရီကြာကြည့်ရှုနေစဉ်သတိပေးချက်ရာပေါင်းတစ်ရာကျော်နှင့်အတူ, ရုပ်ပြဖတ်နေ အံ့ Un ခြင်းမရှိအံ့။ ခြင်း ဘို့ 60 မိနစ်, နှင့် Bluetooth နားကြပ်မှတစ်ဆင့် ၅ နာရီခန့်သီချင်းနားထောင်ခြင်း.
နှိုင်းယှဉ်, Huawei ရဲ့ 6in Mate 10 Pro ကို အလားတူအခြေအနေများအောက်တွင်စွဲချက်အကြားနှစ်ခုအပြည့်အဝရက်ပေါင်းကြာရှည်နိုင်ပါတယ်. ၎င်းသည်မြောက်အမေရိက၏မှတ်စုကိုဖြစ်နိုင်သည်9ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်နိုင်သည်.
Samsung အတွေ့အကြုံ 9.5
screen-off မှတ်စုတိုသည်ယခုတံတိုင်း၏အရောင်နှင့်ကိုက်ညီသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါမှတ်ချက်9Samsung Experience ဟုခေါ်သော Samsung ၏ပြုပြင်ထားသော Android ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကို run သည် 9.5. Android ကိုအခြေခံထားတယ် 8.1 မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သော Android အစား Oreo ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်9ဌပနာမုံ့, အရာစိတ်ပျက်စရာပေမယ့်လုံးဝမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်.
သူကကြည့်ပြီးပြုမူသည် မှတ်စု 8 သို့မဟုတ် Galaxy S9 + Samsung အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ 9. တံတိုင်းနှင့်ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြည့်စွက်အနည်းငယ်ရှိပါသည်, ထိုကဲ့သို့သော Pop-out Edge apps များအဖြစ်, အဆင့်မြင့် split-screen multitasking နှင့်အခြားသူများအပေါ်တွင် windows များအနေဖြင့် app များဖွင့်ရန် pop-out အက်ပလီကေးရှင်းများ - မှတ်စုတွင်ပါရှိသည် 8.
မြေတပြင်လုံးတွင်မှတ်ချက်အပေါ် software ကို9Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံး optimized တူသောခံစားရပါတယ်, ပတ်ပတ်လည်ချောမွေ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ. ဒါဟာအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ် snappy မဟုတ်ပါဘူး OnePlus6သို့မဟုတ် Google ရဲ့ Pixel 2XL, ဒါပေမယ့် Samsung က system တစ်ခုလုံးမှာနှောင့်နှေးမှုကိုကန့်သတ်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သလိုမျိုးခံစားရပါတယ်.
ထောင့်ကျယ်ကင်မရာတွင် dual aperture ပါ ၀ င်သည့် dual-camera စနစ်သည်အလွန်ကြီးမားသောရိုက်ချက်များကိုဖမ်းယူနိုင်သည်, ဒါပေမယ့် AI အက၎င်း၏ကတိတော်များနှင့်အညီနေထိုင်ခဲ့ဘူး. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကျောဘက်ရှိကင်မရာနှစ်လုံးစနစ်သည်တပ်ဆင်ထားသောစနစ်နှင့်အတူတူဖြစ်သည် Galaxy S9 +. နှစ်ခု megapixel ကင်မရာများ, dual aperture နှင့်ကျယ်ပြန့်သည့်ထောင့်နှစ်ခုနှင့်အခြား 2x telephoto ကင်မရာ.
မှတ်စုအတွက်အသစ်9ရိုက်ချက်များအတွက်မြင်ကွင်းများကိုပိုကောင်းအောင် AI စနစ်ဖြစ်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်အပင်များကဲ့သို့အရာဝတ္ထုကိုအသိအမှတ်ပြုသောအခါအရာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မကြာခဏသူတို့တစ်တွေ Instagram ကို filter များမှတဆင့်သွင်းထားပြီးပြီပုံရသောအလွန်အကျွံမြင့်မားသောရုပ်ပုံများကိုဖန်တီးခဲ့တယ်. ငါကပိတ်ထားခြင်းနှင့်ပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုရတယ်. AI သည်ရုပ်ပုံမှုန်ဝါးနေသည့်အခါသို့မဟုတ်သင်၏အရာဝတ္ထုမျက်စိပိတ်ထားချိန်တွင်လည်းရှာဖွေရန်ရည်ရွယ်သည်, ဒါပေမယ့်ငါကနေပါစေသူငယ်ချင်းများကိုရိုက်ချက်များငါယူမျက်တောင်ခတ်မည်မျှနေပါစေငါ့ကိုသတိပေးဖို့မရဘူး.
Lackluster AI ဒြပ်စင်ဘေးဖယ်, ကင်မရာတောက်ပသည်, အသေးစိတ်ကြွယ်ဝသောငွေပမာဏကိုဖမ်းယူ, ပင်တယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူးနှင့်အတူ, နှင့်အလင်းရောင်အခြေအနေများတစ်အကွာအဝေး၌တည်၏. အနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်ရည်လည်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်, 8-megapixel selfie ကင်မရာလိုပဲ.
S Pen ပါ
S Pen အသစ်သည်ဖုန်းနှင့် Bluetooth ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ခလုတ်ကိုနှိပ်သောအခါလုပ်ဆောင်မှုများကိုစတင်နိုင်သည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်မှုအသစ်မှာ Bluetooth ပါသော S Pen ဖြစ်သည်, ဖုန်းကနေ S အထိကန့်သတ်ဖို့ S Pen ကိုသုံးဖို့ Supercapacitor ကိုသုံးတယ် 30 မိနစ်သို့မဟုတ်ဒီဂရီ. အားအပြည့်သွင်းရန်အတွက် S Pen ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်ထည့်ပါ 40 စက္ကန့်.
ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပုံမှန်အတိုင်း scribbling ထက်အခြား, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်လုပ်ဆောင်မှုများစတင်ရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်သည်, ကင်မရာအက်ပ်တွင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကဲ့သို့, တေးဂီတကိုခေတ္တရပ်ခြင်းသို့မဟုတ် PowerPoint တွင်နောက်ဆလိုက်တစ်ခုတင်ခြင်း. ခလုတ်ကိုဖိထားပြီး app ကိုလည်းဖွင့်နိုင်သည်.
အဆိုပါ Bixby ခလုတ်ကိုနေဆဲဖြစ်ပြီး Bixby နေဆဲအကြီးမဟုတ် - ကနည်းပညာပိုင်းဗြိတိန်မှာတောင်မှဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပေဒါကြောင့်ကျနော်တို့အမေရိကန်ဗားရှင်းရ
ဖုန်းနှင့် S Pen နှစ်ခုလုံးသည် IP68 စံနှုန်းများနှင့်ရေစိုခံနိုင်သည်
လက်ဗွေတစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ရန်သင်သည်ဆင်ဆာပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကပွတ်ဆွဲသည်, ဒါပေမယ့်သင်ပုံမှန်အားဖြင့်သင် device ကိုကိုင်ထားသည့် orientation ကိုအတွက်အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်, မဟုတ်ရင်ရလဒ်များကိုမကောင်း
အသိဉာဏ်စကင်, အရာမျက်နှာနှင့်မျက်ဝန်းအသိအမှတ်ပြုမှုကိုပေါင်းစပ်, ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်, သင်မူကား app အများစုအတွက်သင့်လက်ဗွေကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်
၇ လက်မတက်ဘလက်ကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက် screen ကတော်တော်လေးကြီးပါတယ်, သင်တို့မူကား၊
အဆိုပါ Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ကုန်ကျစရိတ်များ £ 899 သိုလှောင်မှု 128GB သို့မဟုတ်သိုလှောင်မှု 512GB နှင့်အတူ£ 1,099 သည်.
နှိုင်းယှဉ်, အဆိုပါ 6.2in Galaxy S9 + ကုန်ကျစရိတ်များ £ 869 သိုလှောင်မှု 128GB နှင့်အတူ, 6.1တွင် Huawei P20 Pro ကုန်ကျစရိတ်များ £ 799 128GB နှင့်အတူ, 6in ဟွာဝေး Mate 10 Pro ကို 128GB ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ £ 699, 6in Google က Pixel2XL 64GB ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ £ 699, အဆိုပါ 6.3in OnePlus664GB ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ £ 469, အဆိုပါ 5.8in ဂုဏ် 10 128GB ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ £ 369, နှင့် 5.8in iPhone အတွက် X ကို 64GB ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ £ 999.
သင်မျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့အနည်းငယ်အပေးအယူများနှင့်အတူကြွလာ, အကြီးမားဆုံးသောအရာသည်အိတ်၏အရွယ်အစားဖြစ်ပြီးအိတ်ကပ်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲစေသည်. ဒါဟာအများကြီးကုန်ကျသည်, အတော်လေးသလောက် Apple ရဲ့သိသိသာသာသေးငယ်အိုင်ဖုန်း X ကိုအဖြစ်ပေမယ့်.
ကင်မရာကကြီးတယ်, မျက်နှာပြင်ကအံ့သြဖွယ်ပါ, သင်ဤသူအပေါင်းတို့ကိုမသုံးကြပါလျှင်အသုံးဝင်သောတံတံနှင့်များပြားလှ features တွေလမ်းအတွက်မရကြဘူး. သင်သည်အခြားဖုန်းများထက်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကြာကြာကစားနိုင်ပြီးမော်နီတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါ၎င်းကိုအလုပ်လုပ်နိုင်သောအလင်းရောင် desktop အဖြစ်ပင်အသုံးပြုနိုင်သည်.
ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ကောင်းမွန်သော်လည်းဆဲလ်အရွယ်အစားကိုပိုကောင်းသင့်သည်, နှင့် Android ဗားရှင်းအသစ်ထွက်ပေါ်ပြီးနောက်စတင်ခြင်း9Pie ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအပြေး 8.1 Oreo စံပြမဟုတ်ပါဘူး.
အဆိုပါမှတ်ချက်9တကယ်မှတ်စုထက်အများကြီးကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ် 8, ဒါပေမယ့်အဟောင်းတွေမော်ဒယ်များကျော်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. ပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်သင့်တယ်မှတ်ချက်.
အကောင်းအဆိုး: ကောင်းသောဘက်ထရီ, အထင်ကြီးစရာကောင်းသည့်မျက်နှာပြင်, ရေစိမ်ခံနိုင်သော, တောက်ပသောကင်မရာ, Bluetooth S Pen, microSD card slot, ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်, တာရှည်ခံစွမ်းဆောင်ရည်, အထိုင်မပါဘဲ DeX, headphone jack
Cons: Android အတွက်သာ 8.1, စျေးကြီး, လက်နှင့်အိတ်ကပ်များအတွက်အလွန်ကြီးမားသည်, လက်ဗွေစကင်နာသည်နောက်ကျောအောက်၌ရှိသင့်သည်, Bixby မလုံလောက်သေးပါ
မှတ်စု၏ယခင်မျိုးဆက်လိုပဲ, အဆိုပါတံဆိပ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဆုံးသို့သေသပ်စွာချော်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Samsung Galaxy S9 + ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: မိုင်များဖြင့်အကောင်းဆုံးကြီးမားသောမျက်နှာပြင်စမတ်ဖုန်း
Google က Pixel2XL ပြန်လည်သုံးသပ်: အကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်ကြီးသော Android အတွေ့အကြုံမရှိသေးပါ
Huawei P20 Pro ပြန်လည်သုံးသပ်မှု - ကင်မရာသုံးလုံးကို iPhone killer
ဟွာဝေး Mate 10 Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: နှစ်ရက်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုနှုတ်ဆက်ပါ
OnePlus6ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: iPhone X ဈေးနှုန်းထက်ဝက်ကျော်အတွက်ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်း
ဂုဏ် 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုကျော်ထိုးနှက်သောပရီမီယံဖုန်းကို
iPhone X ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: နောက်ဆုံးမှာတော့ Apple ကပန်းခြံထဲကခုန်ဆင်းလိုက်တယ်
Samsung ၏ Galaxy Note ကို 9, Samsung ၏ Galaxy Note ကို9ပြန်လည်သုံးသပ်မှု
← Nokia က 8110 4, G ဆန်းစစ်ခြင်း ကင်ဆာအကြောင်းမော်ဒန်ဒဏ္ဍာရီ - အစားအသောက်တွင် 'ဓာတုပစ္စည်း' 'ကနေဝိုင်ဖိုင်မှ →